चलचित्रको बारेमा सोचेकी छैन - जम्काभेट - साप्ताहिक
समाचारवाचिका शैल सुमन सिलवाल केही दिनयता सामाजिक सञ्जालमा छाइरहेकी छिन् । नेपाल टेलिभिजनमा अंग्रेजी समाचार वाचन, समाचार लेखन तथा सम्पादनमा कार्यरत सिलवाल अहिले युवापुस्तामाझ चासो र चर्चाको विषय भएकी छिन् । सुन्दरता र प्रस्तुतिका कारण सामाजिक सञ्जालमा चर्चा कमाएकी शैलसँग साप्ताहिककर्मी प्रकाश रानाभाटको जम्काभेट :
समाचारले भाइरल नै बनायो होइन ?
भाइरल नै बनायो भन्नुपर्‍यो । धेरै जनाले नोटिस गर्नुभएको छ, पछ्याइरहनुभएको छ । सामाजिक सञ्जालहरूमा विभिन्न ट्रोल पनि देखिरहेकी छु ।
भाइरल हुँदा कस्तो अनुभव हुँदो रहेछ ?
रमाइलो लागेको छ । आफूले गरेको कामको मूल्याङ्कन भैरहेको छ भन्ने भएको छ । पहिलेको तुलनामा जिम्मेवारी थपिएको महसुस गरेकी छु ।
भाइरल हुनुमा तपाईंको सुन्दरताले भूमिका खेल्यो कि प्रस्तुतिले ?
दुवैले उत्तिकै भूमिका खेलेजस्तो लाग्छ । सुन्दरताले मात्र भूमिका खेलेको भए जसरी सजिलै दर्शकले मन पराउनुभयो त्यसरी नै तल झारिदिनुहुन्थ्यो । मेरो प्रस्तुतिले पनि दर्शकहरूलाई छोएको हुनुपर्छ ।
मिडियामा किन आउनुभयो ?
म सानैदेखि बोल्न रुचाउने स्वभावकी थिएँ । अरूले मैले बोलेको, काम गरेको सुनून्–देखून् भन्ने लाग्थ्यो । मिडियामार्फत समाजमा केही गर्न सकियोस्, केही योगदान पुर्‍याउन सकियोस् भन्ने हिसाबले यो क्षेत्र रोजेकी हुँ ।
अध्ययन कहाँ गर्नुभयो ?
मैले एसएलसी जेम्सबाट, प्लस टु र ब्याचर गोल्डेन गेटबाट अनि मास्टर्स त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट गरेकी हुँ । पत्रकारिताको अध्ययनका लागि चाहिँ अमेरिकी दूतावासबाट सुसी नामक कार्यक्रमअन्तर्गत वासिङ्टन युनिभर्सिटीमा जाने अवसर मिल्यो । त्यहाँ रहँदा मैले टेलिभिजन, रेडियो तथा पत्रपत्रिकाका बारेमा बुझ्ने अवसर पाएँ ।
तपाईंको नेपाली राम्रो कि अंग्रेजी ?
चिने–जानेजति सबैले मेरो अंग्रेजीको प्रशंसा गर्नुहुन्छ । तिम्रो कस्तो राम्रो अंग्रेजी भन्नुहुन्छ । म आफैंलाई पनि अंग्रेजी नै राम्रो लाग्छ ।
समाचार वाचनका लागि अङ्ग्रेजी नै किन रोज्नुभयो ?
मेरो अंग्रेजी भाषा राम्रो भएका कारण नेपालीमा भन्दा अंग्रेजीमै कन्फिडेन्स आयो ।
पहिलो पटक समाचार पढ्दाको अनुभव सुनाइदिनुहोस् न ?
वर्षौंदेखिको सपना साकार हुँदै थियो, त्यसैले केही नर्भस अनि धेरै उत्साहित महसुस गरेकी थिएँ ।
आफूले पढेको समाचारको रेकर्ड हेर्नुहुन्छ ?
बेला–बेलामा हेर्छु । सुरु–सुरुमा पढेको समाचारको रेकर्ड हेर्दा खुसी लाग्थ्यो । आफूलाई सुधार्न पनि समय–समयमा त्यस्तो रेकर्ड हेर्नुपर्छ ।
भविष्यको लक्ष्य ?
मानिसको एउटा लक्ष्य भए पनि समयले कहिले कता त कहिले कता पुर्‍याउँछ । मेरो चाहिँ जुन क्षेत्रमा भए पनि त्यो क्षेत्रलाई न्याय दिने र सफलता हासिल गर्ने लक्ष्य छ । अध्ययनमा पीचडीसम्म गर्ने सोच छ ।
धेरैले तपाईंको सुन्दरताको प्रशंसा गर्छन् ? तपाई आफैलाई कति राम्री छु जस्तो लाग्छ ?
मलाई सुन्दरता हेर्ने आँखामा भर पर्छ जस्तो लाग्छ । म आफ्नो रूपरंगप्रति सन्तुष्ट छु ।
राम्री बन्नचाहिँ के–के गर्नुहुन्छ ?
नकारात्मक सोच हाबी हुन दिन्नँ । खानपानमा ध्यान दिनुका साथै शारीरिक व्यायाम पनि गर्छु ।
आफैंलाई मन पर्ने आफ्नो अंग ?
चलचित्रबाट अफर आयो भने ?
तत्काललाई सोचेको छैन । केही समयपछि मेरो क्षमताले गर्न सक्ने र राम्रो कथा प्राप्त भयो भने सोच्नैपर्छ ।
पुस्तक पढ्छु । विभिन्न ठाउँ घुम्न जान्छु, युट्युबमा भएका जीवनसँग सम्बधित प्रभावकारी भिडियोहरू हेर्छु ।
तपाईंलाई मन पर्ने समाचार वाचक/वाचिका ?
बन्दना राणा ।
सामाजिक सञ्जाल कत्तिको चलाउनुहुन्छ ?
त्यस्तो धेरै चलाउँदिनँ । तर सामाजिक सञ्जालमा मेरो कामलाई लिएर ट्रोल बन्न थालेपछि अलि बढी चलाउन थालेकी छु ।
प्रतिक्रिया चाहिँ कस्ता आउँछन् ?
धेरैले मेरो वाचनशैली अनि सुन्दरताकै बयान गर्नुहुन्छ । केहीले चाहिँ तपाईंलाई देखेपछि हामीलाई पनि सरकारी जागिरमा प्रवेश गर्न हौसला मिलेको छ भन्नुभएको छ ।
खेलकुदका बारेमा बनेका चलचित्र